Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Curacao » Sandals, Wyndham, Marriott & Hilton: The American Dream Vacation Curaçao Style
Airlines • Airport • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao farany Brezila • Karaiba • Cruising • Vaovao Mafana Curacao • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao lafo vidy • Vaovao momba ny indostria fihaonana • Vaovao • fanorenana • Resorts • tompon'andraikitra • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Sandals, Wyndham, Marriott ary Hilton dia manamarika ny nosy Caribbean Caribbean Curacao maroloko ary manatevin-daharana amin'ny Airlines hamorona ekipa fahafinaretana ho an'ireo mpitsidika amerikana sy kanadiana.
Manatevin-daharana tantaram-pitiavana fialan-tsasatra ny Airlines mba hahafahan'ny Amerikanina mpandehanana miaina fiatoana amin'ny COVID ary lasa Holandey ao Curacao
Ireo marika toa an'i Sandals, Wyndham ary i Hilton dia samy nanisy saina avokoa tao Curaçao.
Niverina an-tsambo ho an'ny mpandeha amerikana avaratra ny Airlift mankany Curaçao.
Ny fepetra takian'i Curaçao sy ny protokol fiarovana dia namboarina hifanindry amin'ny tontolon'ny dia.
Ny nosy Karaiba Holandey any Curaçao dia nahita fisondrotan'ny fivoarana hotely vaovao misy marika vaovao notohanan'ny marika fandraisam-bahiny manerantany, ary koa ny zotra fitomboan'ny sidina. Avy amin'ny Marriott iray nohavaozina tanteraka ka hatrany amin'ny safidy ambony indrindra toa ny Dreams and Sandals, ary koa ireo fananana vao nasiana marika toy ny Trademark avy amin'i Wyndham sy Curio avy amin'ny Hilton Collection, i Curaçao dia mirehareha manolotra trano vaovao hafa miavaka izay manome fahafaham-po ny fitomboan'ny mpandeha amerikana avaratra. .
Miakatra i Curaçao miaraka amin'ny Hotely Vaovao, sidina miitatra ho an'ny mpandeha amerikana sy kanadiana
Ity dia taona matanjaka nanitarana ny nosy niaraka tamin'ny marika toa an'i Sandals, Wyndham ary Hilton izay samy nanisy saina tany Curaçao.
Tany am-piandohan'ny 2021, Sandals Resorts International dia nanambara fa hanova ny toerana misy an'i Santa Barbara Beach & Golf Resort ho lasa izy izao Sandals® Royal Curaçao. Hanomboka amin'ny faran'ny 2021, ny fanovana dia ahitàna efitrano sy efitrano mihaja 350 miitatra manamorona ny Spanish Water Bay sy ny Ranomasina Karaiba, miaraka amin'ny fanitarana fanampiny kasaina hatao amin'ny taona ho avy. Ny drafitra ifotony ho an'ny toeram-pialofana dia misy ny fampidirana singa lehibe ho an'ny traikefa Sandal sonia, ao anatin'izany ny dobo mivelatra vaovao, ny karazan-tsakafo isan-karazany, ny trano honenana ary ny River Suites vao namboarina. Ny mpitsidika koa dia hanana fidirana amin'ny kianja filalaovana Tompondakan'i Pete Dye, misy lavadahy 18 lavadahy, marinasina roa eo an-toerana ary hetsika 38,000 4 metatra toradroa an-trano sy an-kalamanjana ary toerana fihaonana - ny lehibe indrindra eto amin'ny nosy rehefa vita. Ny Sandals® Royal Curaçao dia amidy amin'ny 2021 Aogositra 14 ary tokony hisokatra amin'ny 2022 aprily XNUMX.
Tamin'ny volana mey 2021, Kunuku Aqua Resort dia nanjary ampahany tamin'ny Trademark Collection nataon'i Wyndham portfolio, fitambaran-trano malefaka midadasika sy ambony Hotely mitazona ny toe-panahin'izy ireo mahaleo tena sy ny maha-izy azy. Ny toeram-pialan-tsasatra amin'izao fotoana izao dia misy fanavaozana ivelany sy anatiny, ao anatin'izany ny efi-trano sy trano rehetra, izay tokony ho vita amin'ny 2022.
Ary tamin'ny volana Jona 2021, dia nanambara ny fanaovan-tsonia ny Mangrove Beach Corendon Curaçao Resort vao nosokafana ho fananana vaovao nanatevin-daharana ny portfolio an'i Curio Collection an'ny Hilton. Manana ny Corendon Group, ny trano fandraisam-bahiny rehetra dia antenaina hiova amin'ny volana septambra 2021 ary hamerina ny fanatrehan'i Hilton ao amin'ny nosy. Ao amin'ny toko manaraka ho fananana Curio Collection, Mangrove Beach Corendon Curaçao Resort dia hanolotra traikefa voatahiry ho an'ny mpandeha an-tany mitsidika, ary koa mikarakara ireo mitady ny fialan-tsasatra Caribbean milamina.